ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ ပြည်သူပြည်သားများသို့ ပြောကြားသည့်… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ ပြည်သူပြည်သားများသို့ ပြောကြားသည့်…
· 8 months ago ·47 Comments
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ ပြည်သူပြည်သားများသို့ ပြောကြားသည့်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်လပြည့် အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်း
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော နိင်ငံသူနိုင်ငံသား သွေးချင်းညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ရောက်ရှိနေသော သွေးချင်းများအားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ (National Unity Government- NUG) ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ ဒီကနေ့ဆိုရင် တစ်လတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကို ပြည်သူလူထု တစ်ရပ် လုံးက တစ်ခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး အဘက်ဘက်က ပံ့ပိုးကူညီနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင် ဝမ်းမြောက်မိသလို၊ တစ်ဖက်ကလည်း ပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာ ရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖိနှိပ်၊ ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်နေတာတွေကို တွေ့မြင်၊ ကြားသိနေရတဲ့ အတွက် စိတ်နှလုံးထိခိုက်ကြေကွဲရကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ဟာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ အလိုက်၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ခွဲဝေပြီး ပြည်သူတွေ မနှစ်မြို့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကို ထမ်းဆောင် နိုင်ဖို့အတွက် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားက နေ့ညမပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီလို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို၊ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်း အမြဲမပြတ် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး ပြည်သူလူထုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ကြီး အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာစေရေး အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်အစိုးရတစ်ရပ်မှာမဆို မိမိနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မယ့် တပ်မတော်တစ်ရပ် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထု လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးရဲ့ ရှေ့ပြေးအမြုတေ အဖြစ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (PDF)ကို အစိုးရသက်တမ်းတစ်လမပြည့်မီ ကာလအတွင်းမှာပဲ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်း ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ ခေတ်မီလက်နက်ကိုင်တပ်မတော်တစ်ရပ်ကို ထူထောင်ဖို့အတွက် စစ်ပညာ၊ နည်းစနစ်၊ စုဖွဲ့မှုပုံစံတွေကစပြီး လိုအပ်တာတွေ စနစ်တကျ လေ့ကျင်သင်ကြား ပေးရတာ၊ စစ်သည်အင်အား၊ လက်နက်အင်အားပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရတာ တွေကြောင့် ထိုက်သင့်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေအားလုံးက လည်း လက်ခံနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစနစ်တကျ လေ့ကျင့် ပျိုးထောင် ပေးနိုင်မှလည်း ခိုင်မာတောင့်တင်းပြီး ပြည်သူလူထုကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကာ အကွယ်ပေးနိုင်မယ့် တပ်မတော်တစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ လက်ပါးစေများက မင်းတပ်မြို့က ပြည်သူတွေကို စစ်မြေပြင်သုံးလက်နက်ကြီးများ၊ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များကိုပါ အသုံးပြုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ၊ ပြည်သူတွေကို လူသားဒိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာတွေကို တွေ့မြင်ကြားသိရတဲ့အတွက် အလွန်အင်မတန်မှ အံဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်။ မင်းတပ်မြို့က ပြည်သူတွေကို အပြည့်အဝအကာအကွယ် မပေး နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကို အသက်စွန့်ပြီး ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့ မင်းတပ်မြို့က သူရဲကောင်းပြည်သူတွေအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုကြောင်းလည်း ဒီနေရာက ပြောကြားလိုပါတယ်။ တစ်ဖက် ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ မင်းတပ်ပြည်သူ တွေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်စုံတစ်ရာ ပြေလျော့ သက်သာမှု ရစေဖို့အတွက် မင်းတပ်ပြည်သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ အစိုးရတွေကို ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီး အကူအညီတောင်းခံတာတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို မြေပြင်က ပြည်သူလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အလျင်အမြန်ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မင်းတပ်ပြည်သူတွေအပါအဝင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ ဒီလို အခြေအနေဆိုး တွေကနေ လွန်မြောက်နိုင်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့လည်း စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရကို တစ်ခဲနက် ထောက်ခံပြီး အောင်ပွဲရသည်အထိ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင် ပေးကြဖို့နဲ့ မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်က အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်ဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ထားကြဖို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ် အပ်ပါတယ်။
Like – 29K Share – 5576
Khun Htoo says:
2021-05-16 at 7:02 PM
ယုံကြည်စိတ်ကို တစက်မှ မလျော့ခဲ့ပါဘူး ဝန်ကြီးချုပ် ခဗျ✊✊✊
2021-05-16 at 7:04 PM
ဝန်ကြီးချုပ်ကြီး ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း ကျန်းမာချမ်းသာ၍ နိုင်ငံတော်အကျိုး ဆထက်ထမ်းပိုး ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ
Aung T Myint says:
အမြဲတမ်း ထောက်ခံ ရပ်တည်နေမယ်
ခင္ဗ်ားတို့ ေစာက္ စိတ္ထဲမွာ ဒီကိစၥႀကီးကငါပါဝင္စရာမလိုပါဘူး။ ငါလဲတတ္နိုင္တဲ့ဘက္က board ေလးကိုင္ၿပီး ဓာတ္ပုံရိုက္ ဆႏၵျပၿပီးၿပီပဲ။
အခုလဲသူမ်ားေတြလုပ္ေနတာပဲ။ CRPH လုပ္လိမ့္မယ္။ NUG လုပ္လိမ့္မယ္။ EAOs ေတြလုပ္လိမ့္မယ္။ ေတာထဲက စစ္သင္တန္းတက္ ေနတဲ့သူေတြလုပ္လိမ့္မယ္။ ငါကေတာ့ wifi ေလးသုံးမယ္။ myday ေလးတင္မယ္။ နိုင္ငံေရးေကာင္းရင္ အခန္႔သား နိုင္ငံျခားထြက္ဖို့ scholarship ေလး ျပင္မယ္။ ဒါႀကီးကတစ္ခ်ိန္ၾကရင္ ၿပီးသြားပါလိမ့္မယ္လို့ ထင္ေနတာလား?
ထင္ေနရင္ေတာ့ လီးပဲေပါ့။ Revolution တစ္ခုျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္ရင္ မ်ားမ်ားဝိုင္းတြန္းမွရမွာ။ အခုက တြန္းတဲ့ေကာင္ေတြ တြန္းပါေစ။ ငါကေတာ့ အခန္႔သားတက္ထိုင္ေနမယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးပဲ။
အဲ့လိုေစာက္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လီးေတာင္မနိုင္ဘူး။ 88 က ေစာက္ခ်ိဳးေတြ 21 မွာလာမခ်ိဴးနဲ႔သာ ေအာ္ေနတာ ခင္ဗ်ားတို့ ေစာက္ခ်ိဳးေတြလဲ ျပန္ၾကည့္ေပါ့။
ဒီအခ်ိန္ထိ အိမ္ကခြင့္မျပဳတာတို့ အိမ္မပိုင္တာတို့ လီးစကားေတြလာေျပာေနေသးရင္ လီးနဲ႔ပဲထိုးမယ္။
အဲ့တာဆိုဘာလုပ္ရမလဲ? သန္သန္မာမာ ေျခေကာင္းလက္ေကာင္းရွိတဲ့သူတိုင္း တိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ။ စစ္သင္တန္းတက္ရင္တက္ မတက္ရင္ ကိုယ့္အဖြဲ႕နဲ႔ကိုယ္ budget ေတြ weapons ေတြ plan ေတြေသခ်ာခ်ၿပီး ျပင္ဆင္ထား။ ျပည္တြင္းစစ္ ေျမျပန္႔ကိုေရာက္လာရင္ ငါဘယ္လိုကူညီနိုင္မလဲ အခုေရာဘာလုပ္ေပးနိုင္မလဲ ဆိုတာ ႀကိဳျပင္ထား။ အမ်ိဳးသမီးေတြလဲ Gender equality လိုခ်င္ရင္ ဒီလိုမ်ိဴးလိုက္လုပ္လို့ရတယ္။
အိမ္က စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းလို့အလုပ္လုပ္ေနရၿပီး မပါဝင္နိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ္မလုပ္နိုင္ရင္ လုပ္နိုင္တဲ့သူေတြက တကယ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပိုက္ဆံလိုတယ္။ သူတို့ကို လွူ။ ေစာက္တလြဲေကာင္ေတြကိုေတာ့ သြားမလွူနဲ႔ေပါ့။
အဲ့ေတာ့ အခုလုပ္စရာက်န္တာက ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ ကိုယ္တိုင္ခ်ဖို့ျပင္မွာနဲ႔။ ခ်မယ့္သူေတြကို support ဖို့။ ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မေအလိုးပဲ။
Thaw Gyi says:
2021-05-16 at 7:11 PM
NUGတစ်လအတွင်းမှာ အသက်​ဘေး က​​နေရသ​လောက်လူ​တွေကို ကူညီ​ပေးလို့​ကျေးဇူးပါ.
Ei ChoThet says:
2021-05-16 at 7:14 PM
We always trust NUG stand with you
2021-05-16 at 7:17 PM
ငါတို့အရှုံးပေးမ ရှုံးမှာကို သိထားဖို့လိုတယ် အားလုံးက တိုက်ပွဲ ဝင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေတယ် ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်
2021-05-16 at 7:29 PM
Khing Swe OO says:
2021-05-16 at 7:38 PM
ခ်က္ခ်င္း ကယ္တင္နိုင္ပါေစ လူကုန္ မွလာေနရင္ ေတာ့ ေနာင္တ ပဲရလိုက္မယ္
ဒါမှ ပြည်သူ အစိုးရ
နွေ ဦး ဖြိုး says:
အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတာ တစ်လလောက်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် အတော် ခရီးရောက်လာပါပြီ။
မအလ ကတော့ အာဏာသိမ်းတာ သုံးလကျော်ပြီးတာတောင် ဒစ်လည်နေတုန်းပဲ 😁
2021-05-16 at 7:47 PM
ယုံကြည်မူ့ နားလည်မူ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း နားလည်မူ့တို့ဖြင့်
ထား၍ ဆင်ခြင်တုံတရား အစဉ်ထား
ပြီး ကြုံရာ ကျရာအခန်းကဏ္ဏ အသီး
သီးမှ တာဝန်သိ တာဝန်ရှိ ကြောင်း
ဘယ်ဘက်ထိပ်က တံဆိပ်မှာ ပါတဲ့ ခြသေ့် ပုံကြီးဖြုတ်လိုက်လို့ မရဘူးလားဟင် ။ ခြသေ့် ကြီး မုန်းလွန်းလို့ ပါ
2021-05-16 at 7:50 PM
NUG ရဲ့ ကာကွယ်​ရေးဝန်ကြီးဌာန ​ပြောတာ တခါ​လောက် နား​ထောင်ချင်တယ်ကွာ✌
မင်္ဂလာပါ NUG ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရပါမယ်
Hnin Si Khin says:
2021-05-16 at 8:00 PM
ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း နဲ့ တကွ NUG အစိုးရ တစ်ဖွဲ့လုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ရှင့်
အောင်ဆန်း သွေး says:
အားရတယ် အားရှိတယ် အားတက်တယ်ဗျာ မင်းတပ်ကရဲဘော်တွေနဲ့ တခြားမြို့တွေက ရဲဘော်တွေ NUGကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
2021-05-16 at 8:01 PM
ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း ကျန်းမာပါ​စေ ​ဘေးကင်းပါ​စေ🙏။ ​​စေတနာ​တွေ​ရောင်ပြန်ဟပ်လို့ ပြည်သူ​တွေမှလည်း ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို လေးစားချစ်ခင် ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။ 🥰
2021-05-16 at 8:08 PM
Thank you so much. We support National Unity Government (NUG)
2021-05-16 at 8:16 PM
ဝန်ကြီးချုပ် ဉီးမန်းဝင်းခိုင်သန်း နှင့်တစ်ကွ NUG, CRPH အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ဘေးကင်းကြပါစေ။ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းလည်း မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး အန္ဒရာယ်၊ အခက်အခဲများစွာ ကြားထဲမှ ခက်ခဲ ပင်ပန်းစွာ ဉီးဆောင်မှုပေးနေခြင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ko Sum says:
2021-05-16 at 8:17 PM
Dr SS လို႔ဒုံး 300 ပြဲသိမ္း ေလဘဲ မျဖစ္ေစျခင္ဘူး
ယုံၾကည္မူ မဲ့တယ္ ကိုယ္အားကိုကိုးလဲျပည္သူက အဆင့္တင့္ဘဲ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မေပးပါနဲ႔ အတည္ေျပာေျပာပါ
2021-05-16 at 8:32 PM
ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ ။
အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ပြည်ဝစွာယုံကြည်အားကိုးပါကြောင်း –
Nko Ye Htwe says:
2021-05-16 at 8:35 PM
ဖထီးကျန်းမာ​ရေး​ကောင်းရဲ့လားဗျ။ ကိုယ်​ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာပါ​စေဗျ။
Nang Ying Noan says:
2021-05-16 at 8:37 PM
Ko Too says:
2021-05-16 at 8:44 PM
NUG အ​ေ နနဲ့ ခက္ခဲလွတဲ့ အခ်ိန္ အ​ေ ျခအ​ေ န ဆိုတာကို နားလည္ စာနာပါတယ္ …ျပည္သူ​ေ တြကလည္း အရင္ ၈၈၈၈ ကျပည္သူ​ေ တြ ခ်ည္းမဟုတ္​ေ တာ့ပါဘူး . ..အားလုံးရဲ့ လိုလားမွု့ဟာ စစ္အာဏာရွင္အျမစ္ျပတ္ဖို့ပါဘဲ …စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ့ စိတ္ရွည္ ဇြဲသန္စြာ ​ေ ရွ့ဆက္ျကမွာပါ ….အ​ေ ရး​ေ တာ္ပုံ ​ေ အာင္ရမည္ …
2021-05-16 at 8:47 PM
Khet Khet Naing says:
2021-05-16 at 8:56 PM
Thein Htet Aung says:
ဒုတိယ သမ္မတကြီးနှင့် ဝန်ကြီးများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ နိုင်ငံအကျိူး အကောင်းဆုံး အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ
သူရ ဗေဒါ says:
2021-05-16 at 9:15 PM
လေ သေနက်တွေ ပြစ်လို့ မပြီး သေးဘူးလားဗျာ ပြည်သူတွေလဲ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် သေနေတယ်
Aye Myat Htet says:
2021-05-16 at 9:26 PM
NUG, CRPH အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ ေဘးကင္းၾကပါေစ။
ႀကံတိုင္း​ေအာင္ ေဆာင္တိုင္းလည္း ေျမာက္နိုင္ ၾကပါေစ။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး
အႏၵရာယ္၊ အခက္အခဲမ်ားစြာျကားထဲမွ ခက္ခဲ ပင္ပန္းစြာဦး​​​ေဆာင္မွုေပးေနျခင္းအား
Mungga Gindai says:
we support NUG ထာဝရ
2021-05-16 at 9:34 PM
Dictatorship must be erradicated not only in Myanmar but also around the world. We believe NUG.
မြန်မာ့​ မြေပေါ်မှာ အာဏာရှင်တွေကို အပြီးတိုင် ထာဝရ ပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်ပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Toeree Kyaw says:
2021-05-16 at 9:50 PM
ဘယ်မှာ စိတ် ချမ်း သာရမလဲဝန်ကြီးရယ်မြန်မာမြေမှာမွှေးဆိုတော့ခံစားရတယ်
Min Khaung Nyein says:
2021-05-16 at 9:52 PM
စစ္ေကာင္စီ ရဲ ့လုပ္ရပ္က စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္လုပ္ေနတာ မင္းတပ္ၿမုိ့ဆုိတာၿမုိ ့ေလးေသးေသးေလးပါ ဒါကုိေတာင္ အေျမာက္ပစ္ကူ ေလေႀကာင္းပစ္ကူယူၿပီးမွ ၿမုိ ့ရဲ့ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေပါ ္လုပ္တာေတြ လူသားဒုိင္းကာၿပီးမွ ၿမုိ ့ကုိ ဝင္သြားႏုိင္တာေတြ ေျပာျပမယ္ဆုိ လက္နက္ကုိင္ထားတာခ်င္း တူတူေတာင္ ဒီေကာင္ေတြကုိင္ထားတာ ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္ ျပည္သူေတြကုိင္ထားတာ တူူမီးပဲ ရွိတာ ဘာပဲေျပာေျပာ မင္းတပ္ကုိ အားက်တယ္ မီတာလာေကာက္တဲ့ေကာင္ေတြ မသာဖိတ္စာ ႀကုိသာရုိက္ထား
Chit Ya Thu says:
2021-05-16 at 9:53 PM
ျပည္သူေတြက ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ကုိ လက္ခံယုံျကည္ပါတယ္ ရဲရဲ ဝံဝံ လုပ္ပါ ေျပာပါ ျပတ္ျပတ္သားသား ယုံျကည္မူ အျပည့္နဲ႕ ျပည္သူနဲ႕ အတူ တုိက္ပြဲဝင္ပါဗ်ာ
Khun Zaw says:
ပြည်သူတွေဆီ လက်နက်တွေရောက်အောင်သာ မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ
Sai Htun says:
2021-05-16 at 10:10 PM
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဉီးမန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏွင့္တစ္ကြ NUG, CRPH အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ ေဘးကင္းၾကပါေစ။ ႀကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းလည္း ေျမာက္နိုင္ၾကပါေစ။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး အႏၵရာယ္၊ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကားထဲမွ ခက္ခဲ ပင္ပန္းစြာ ဉီးေဆာင္မွုေပးေနျခင္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 🌿🌿🌿🌿🌿
2021-05-16 at 10:19 PM
CDM ​တွေ အတွက် သူတို့ ဘယ်​လောက်အထိ ​တောင့်ခံရမလဲ ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ ကို သူတို့သိဖို့လိုပါတယ်.. ဒါမှ ဝင်​ငွေမရှိတဲ့ ဒီကာလ အတွင်း သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ စဥ်းစားနိုင်မှာပါ ။ မဟုတ်ရင်ကြာရင်​ဝေဝါးလာပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကို CRPH က​သေချာ ဖြတ်​ပေးရမှာပါ ။ ​မြေပြင်မှာ CDM အတွက် financial support, moral support ဆိုတာ ကွက်ကျားမိုးပါ ။ လူတိုင်းလည်း support ယူချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ CRPH ​သေချာဖြတ်မ​ပေးရင် ​ဝေ​ဝါးပြီး အများစု ပြန်ဝင်ကုန်ပါလိမ့်မယ်.. ခု​တောင် အချိန် ၄ လကြာလာ​တော့ ပြန်ဝင်ကုန်ကြပါပြီ.. CRPH အ​နေနဲ့ ​သေချာဖြတ်မ​ပေးရင်. CDM ​တွေအ​နေနဲ့ ၆ လ လား.. ၁ နှစ်လား..၂ နှစ်လား.. ​သေချာ မသိပဲ သူတို့ကို ပြန်မဝင်နဲ့ သွား​ပြောလို့ မရပါဘူး..ခု CRPH က ဖြတ်မ​ပေး​တော့ ၁ နှစ်..၂နှစ်ကြာမယ်ထင်ပြီး ပြန်ဝင်ဖို့ စဥ်းစား​နေသူ​တွေ ​တွေ့​နေရပါတယ်..
​နောက် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တ​​​​နေ့ထက်တ​နေ့
အများစု ဒီထဲ မပါတဲ့သူ​တွေပဲ CRPH action ကို​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး ​စောင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
Satea Hnamte says:
2021-05-16 at 10:24 PM
အောင်ချင်ရင် ပြည်သူတွေကို ခတ်မှီလက်နက်အမြန်ပို့လေ တို့မ​ီး လေသေနတ်နဲ့ ပြည်သူတွေကို မတိုက်ခိုင်းပါနဲ့
Źàw Ïńń Țùń says:
2021-05-16 at 10:58 PM
စာလေးတွေစီ မိန့်ခွန်းတွေခြွေနေတာကို.အားရမိပေမဲ့ ပြည်သူတွေ အသက် ဆုံးရှုံးမှု အရမ်းများနေပြီ တောင့်ခံ နေရတာလဲ ကြာပြီ ပြန်ချရအောင် လေးခွပဲရှိနေတယ်​ဗျာ စာထုတ်ရုံနဲ့လဲအာဏာပြန်မရမှန်းသိနေပြီဆိုရင် လက်နက်ကိုင်ကြရတော့မှာ လက်နက်ကိစ္စလေး အမြန်ဆုံး စီစဥ်ပေးစေလိုပါတယ်ဗျာ
Kathy Khine says:
2021-05-17 at 12:58 AM
ပြည်သူရဲ့​ငွေ​တွေ US ကလည်းပြန်​ပေးဖို့စရင်းရှင်းတမ်းတင်​နေရတာ​တွေ​ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ NUG ကို​ပေးမယ်လို့ရင်းနှိးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီး​ပြောပါတယ်
US က​တောင် NUG ကိုအသိအမှတ်မပြု​သေးရင်လက်နက်​တွေကဘယ်လိုရနိုင်မှာလဲ အဲ့​ငွေ​တွေကိုလည်း CDM
​တွေနဲ့စစ်​ဘေး​ရှောင်​တွေနဲ့ကျဆုံးသွား​သောသူရဲ​ကောင်းမိသားစု​တွေကို​​ထောက်ပံ့ဖို့သုံးမယ်လို့ဘတ်ဂျက်​ရေး​နေတယ်လို့​ပြောပါတယ် လက်နက်ဘယ်လိုဝယ်မှာလဲ ​ခေတ်မှီလက်နက်ရဖို့လို့မိန့်ခွန်းမှာ​ပြောသွားတာဘယ်က​နေရဖို့ရှိပါသလဲ​မေးလို့ရပါသလား ပြည်သူ​တွေဆီကအလှူခံထားတဲ့​ငွေနဲ့ဘဲဝယ်မှာလား အစိုးရအဖြစ် US ကအသိအမှတ်မပြု​သေးရင်လက်နက်ဘည်းဘယ်လို​ရောင်းမလဲ US ကအသိအမှတ်ပြု​အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစား​ပေးပါသမ္မတကြီးရှင့်ပြည်သူတစ်​ယောက်အ​နေနဲ့တိုင်းပြည်က US အတွက်အကျိုးအမြတ် ဘယ်လိုလဲရဲရဲဆုံးဖြတ်ပြီး​ပေးလည်းသ​ဘောတူပါတယ်
Pa Tuang says:
2021-05-17 at 11:11 AM
N U Gအောင်မြင်ပါစေ
Thal Su Nwe says:
2021-05-17 at 12:00 PM
We stand with NUG
We support NUG ❤️
စစ်အာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားရမည်။